မိန်းမက အိမ်မှုကိစ္စမလုပ်ဘူး၊ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် ယောက်ျားကကွာရှင်းခွင့်တောင်းနိုင်တယ်။
တကယ်လို့ မိန်းမဖက်က အရင်ကွာရှင်းခွင့်တောင်းပြီးနောက်အိမ်ထောင်ထပ်ပြုခဲ့ရင်နောက်ယောက်ျားက အရင်ယောက်က်ျားကို မင်္ဂလာစရိတ်နှစ်ဆလျော်ရတယ်။ တကယ်လို့ ယောက်ျားဖက်က အရင်ကွာရှင်းခွင့် တောင်းခဲ့ရင်မိန်းမနောက်အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါ နောက်ယောက်ျားက အရင်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာစရိတ်ကို ပေးလျော်ရပါတယ်။
ယောက်ျား သို့မဟုတ် မိန်းမ တစ်ယောက်ယောက်ကကွာရှင်းခွင့်တောင်းနိုင်တယ်။တကယ်လို့နှစ်ဦးလုံးပြိုင်တူကွာရှင်းခွင့်တောင်းခဲ့
မိသားစုရိုးရာမှာ မိန်းမဖြစ်သူက အပြင်မထွက်ခင် လင်ယောက်ျားရဲ့ သဘောတူညီချက်ကိုယူရတယ်။ တကယ်လို့ တစ်နေ့မှာ ယောက်ျားက မိန်းမကိုမလိုချင်တော့တဲ့အခါအပြင်ထွက်မယ်လို့ မိန်းမခွင့်လာတောင်းတဲ့အချိန် "သွား.. အိမ်ပြန်မလာနဲ့တော့"
ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ မချစ်မနှစ်သက်ကြတော့တဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာရုံးကိုသွားပြီးကွာရှင်းခွင့် တောင်းနိုင်တယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေက သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆံပင်ကိုတစ်ဝက်စီဖြတ်ပြီး အချင်းချင်းလှဲလှယ်ခိုင်းကြတယ်။
ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ မချစ်မနှစ်သက်ကြတော့တဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာရုံးကိုသွားပြီးကွာရှင်းခွင့် တောင်းနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ နွားတစ်ကောင်ဝယ် သတ်ဖြတ်ပြီးနှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုး၊ မောင်နှမတွေခေါ်ပြီး စားသောက်ရတယ်။ စားသောက်ပြီးရင်ယောက်ျားနဲ့
မိန်းမ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး တစ်ယောက်ကိုပါး(၁ဝ) ချက်စီရိုက်ရတယ်။ပါးရိုက်ရတာက နောက်ဆုံးနာကျင်ခြင်းကို မှတ်ယူစေဖို
လင်မယားနှစ်ယောက်ကွာရှင်းချင်ရင်(၃)ရက်အစာငတ်ခံရတယ်။အစာငတ်ခံပြီး(၄)ရက်မြောက်မှာဒေသခံအသက်ကြီးသူတစ်ယောက်ဆီသွားပြီး အင်အားရှိမရှိအစစ်ဆေးခံရတယ်။ တကယ်လို့ အားမရှိတာမှန်ရင် ကွာရှင်းခွင့်ပေးတယ်။လိမ်ညာနေတယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝ တစ်သက်လုံး ကွာရှင်းခွင့်မပေးတော့ဘူး။
ချစ်သူရယ်.. မလာပါနဲ့လို့ မတားနိုင်သလို
ကြည့်ရင်းနဲ့ ရင်မှာ ချစ်စိတ်တွေတိုးပွား
စာအုပ်နဲ့မှတ်ထားရင် အလုပ်ရှုပ်လို့ ဒီနေရာလေးမှာ လာစု ထားတာပါ လိုချင်ရင်တော့ ယူသွားကြနော်
ရေးသားခဲ့သော post များ
ရေးသားခဲ့သော post များ 06/20 - 06/27 (6) 05/30 - 06/06 (1)
မျိုးစိုးသူရဲ့ နေရာလေးမှ ကြိုဆိုပါတယ်.ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ..လိုအပ်တာရှိရင် bmm999@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ဆုံးမနိုင်ပါတယ်။
ဘုန်းမြတ်ဟိန်း. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.